लकडाउन अबधीभर घरमै रहेका शिक्षकलाई कसरी देखियो कोरोना पोजिटिभ ? – कामना डेली
लकडाउन अबधीभर घरमै रहेका शिक्षकलाई कसरी देखियो कोरोना पोजिटिभ ?
On २०७७ जेष्ठ ७, बुधबार १६:१६ Last updated May 20, 2020
अनिल खत्री, गुल्मी । गुल्मीका कोरोाना संक्रमित शिक्षकलाई कसरी कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने बारे गाउँपालिकाले अध्ययन सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले बुधवार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै ’लकडाउन अबधीभर घरमै रहेका उहाँलाई कसरी कोभिड १९को पोजेटिभ देखियो अध्यन भइरहेको जनाएको छ ।
मदाने गाउँपालिका–६ का ४१ बर्षिय कोरोना संक्रमित शिक्षकको आईसियूमै उपचारत रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ । मदाने गाउँपालिकाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बिरामीको स्वास्थय लाभको कामना समेत गरेको छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालकै आईसियु कक्षमा उपचार भैरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा संक्रमित शिक्षकले अध्याापन गरेको बिद्यालयमा क्वारेन्टाईन स्थापना नगरिएको स्पष्ट्र पारिएको छ ।
उनको हालको स्वास्थ्य अबस्था र घर नजिकै क्वारेन्टाईन थियो भन्ने समाचार भ्रामक भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । क्रिमशन अस्पतालले समेत गुल्मीका संक्रमित शिक्षक आईसियुमा उपचारत भएको तर अबस्था भने गंभिर रहेको बिज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका ३० जनाको स्वाब संकलन
कोरोना संक्रमित बिरामी फेला परेपछि मदाने गाउँपालिकाबाट ३० जनाको स्वाब संकलन गरेर पिसिआर चेकको लागि बुटवलमा पठाइएको छ । सोमबार जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर–६ का ४१ वर्षियामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
संक्रमित बिरामी फेलापरेसँगै उनिसँगै निजिकिएकाहरु सबैलाई पहिचाहन गरि आरडिटी र पिसिआर परिक्षण गर्ने कार्य तिब्र पारिएको जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले बताए । मदाने गाउँपालिकामा स्वस्थ्य कर्मी खटिएपछि जेठ ६ र ७ गते गुल्मी अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय अनुसार २ दिन बन्द गरिएको थियो ।